बार्सिलोनालाई पछि पार्दै लिगाको दोस्रो स्थानमा उक्लियाे सेभिल्ला - Sitemap
Loading... बार्सिलोनालाई पछि पार्दै लिगाको दोस्रो स्थानमा उक्लियाे सेभिल्ला
एजेन्सी, २४ पुस ।
सेभिल्ला बार्सिलोनालाई पछि पार्दै स्पेनिस ला लिगाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।
लिग अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा रियल सोसिडाडलाई ४–० ले हराएको सेभिल्ला बार्सिलोनालाई पछि पारेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो । सेभिल्लाको जितमा विस्साम बेन यड्डरले ह्याट्रिक गरे ।
यस्तै साराबिएले एक गोल गरे । यड्डरले २५, २९ र ८३ औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका हुन् । उनले ह्याट्रिक पूरा गर्नु अघि ७३ औं मिनेटमा साराबिएले एक गोल गरेका थिए । जितपछि दोस्रो स्थानमा उक्लिएको सेभिल्लाको १७ खेलबाट ३६ अंक भएको छ ।
एक खेल कम खेलेको बार्सिलोनाको ३४ अंक छ । राति नै भएको खेलमा एथ्लेटिको मड्रिडले एइबरलाई २–० ले हरायो । एथ्लेटिकोको जितमा साउल निगुएज र एन्टोनी ग्रिजम्यानले गोल गरे । जितपछि चौथो स्थानको एथ्लेटिकोको १७ खेलबाट ३१ अंक भएको छ । अर्को खेलमा लास पालमसले स्पोर्टिङ गिजोनलाई १–० ले हरायो । पुरा पढ्नुहोस्
गायक हेमन्त रानाले गाएको एउटा गीतले यो साता युट्युबमा तहल्का मच्चाइरहेको छ । माघ २८ गते युट्युबमा अपलोड गरिएको ‘साइँली...’ गीत सार्वजनिक भएको पहिलो २४ घण्टामा पाँच लाख पटक हेरिएको छ भने दो...
छोरा जन्माउनका लागि लोग्ने स्वास्नीले के गर्नुपर्छ ? भारतको एउटा पत्रिकाले छोरो पाउने काइदा सुझाएको...
यो कुरा सुन्दा जति अनौठो लाग्दछ, पत्याउन पनि उत्ति नै मुस्किल पर्छ । फिल्म तथा कथाहरुमा त भूतका किस्...
संसारकै सबैभन्दा मोटी मानिएकी इजिप्टकी महिला अहमद अब्दुलतीलाई शल्यक्रियाका लागि भारतको मुम्बई ल्याइए...
सिएनएन– भारतको कर्नाटकमा केही महिनाअघि एउटा अनौठो बच्चा जन्मिएको थियो। जसको चार खुट्टा र...
यी कम्पनीले संसारका सबैभन्दा धेरै तलब दिने गर्दछ संसार भरका जागिरमा प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिहरुकै माग धेरै छ। त्यही अनुरुप बढि तलव पाउनेमा पनि प्राविधिक बिषय पढेकै जनशक्ति अधिक छन्। संसारमा सबैभन...
वासिंटन। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आएको भीषण आँधीमा परेर चार जनाको मृत्यु भएको छ भने थुपै्रं घाइते भएका छन् । आँधीबाट लाखौं मानिस प्रभावित बनेका छन्...
विश्वकै उत्कृष्ट पाँचसय ठूलामा सूचीकृत कम्पनी...
दक्षिणी सिन्ध प्रान्तको निकै चर्...
बेइजिङ, फागुन ५ । चीनले भारतलाई ‘आगोसँग नखेल्न’ चेतावनी दिएको छ । उसले दुई देशबीचको सम्बन्ध मित्रवत् राख्न भारतका तर्फबाट ‘एक चीन&rs...
बिहानको घाम झुल्केसँगै छ दशक पार गरेका साइला गुरुङ सेती नदीको किनारमा पुग्छन् । बालुवा चाल्ने र बोकेर बाटोमा ल्याउने उनको दैनिकी जस्तो नै छ । ...
प्रेममा पर्ने कारणहरु यस्ता छन् वैज्ञानिकहरुले गरेको शोधअनुसार तपाईंको हार्मोन, रुचि र तपाईंका अभिभावकजस्ता कुराले तपाईंको प्रेमी या प्रेमिका छान्ने वा छानिने प्रमुख कारण बन्न सक्छन्...
कति बलियाे छ तपार्इकाे बैवाहीक सम्बन्ध सुताइबाट पत्ता लगाउनुहोस बैवाहिक जिवन मानिसकालागि अत्यन्तै अावस्यकीय र शुखमयी क्षणकाे रूपमा मानीदै अाएकाे छ । यसले परीवारीक सम्बन्ध बलीयाे बनाउनका साथै जिवनमा नयाँ उर्जा...
थाहा छ तपाईको श्रीमती कस्तो !
तपाईलाई थाहा छ श्रीमती कति किसिमका हुन्छन् ? बौद्ध ग्रन्थमा श्रीमतीका प्रकार बारे एउटा रमाइलो वर्णन भेटिएको छ । भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका श्र...
बाढीपीडित गुनासो : व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन झन्डै एक दशकअघि दोदा नदीमा आएको बाढीले घरखेत पूर्ण रुपमा बगाएपछि बलराम सिंह महता बाढीपीडित बन्न पुगे । बाढीले उनिसंग भएको डेढ बिघा खेत...